ရာသီအေးလာ ဆောင်းအခါ သတိထားစရာ! – Burmese Online News
ရာသီအေးလာ ဆောင်းအခါ သတိထားစရာ!
အေးလာသည့် ရာသီဥတုမျိုးတွင် မိမိကျန်းမာရေး အတွက် ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ရန် မိမိ ခန္ဓာကိုယ့်အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်ပါသည် ။ အဓိကသည်လို့ ဥတုမျိုးတွင် သွေးတိုးရောဂါ အခံရှိသူများ အထူးသတိထားနေထိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည် ။ တစ်ချို့ ငယ်ရွယ်သူများအနေဖြင့် မိမိတွင် သွေးတိုးနေသည့် အနေအထားလည်း မသိ မရှိဘူးထင်ပြီး ခေါင်းလျှော်ခြင်း ၊ ရေချိုးခြင်းကို အလေးအနက်မထားဘဲ ပေါ့ပေါ့လေးတွေးပြီး လုပ်ဆောင်ကျလို့လေဖြတ်ခြင်း ၊ လေဖြန်းခြင်း အဖြစ် ပါးတွေရွဲခြင်း မျက်ခွံတစ်ဖက် ပိတ်မရခြင်း အဖြစ်ကို ရောက်ရှိတက်ပါသည်။ကျန်းမာရေးကိုယ်လက်လှုပ်ရှားခြင်း အဖြစ် ရာသီဥတုအေးချမ်းသော နံနက်ခင်းစောစောထပြီး လမ်းလျှောက်ခြင်း ၊ ပြေးခြင်း လုပ်ဆောင်သည့် အခါတွင် အအေးမပတ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ် ဝတ်ဆင်ပြီးမှသာ ကိုယ့်လက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သင့်ပါသည် ။
ရာသီဥတုနှင့်လိုက်ဖက်သည့်ဝတ်စားမှု့ ကိုဝတ်ဆင်ပြီး နေထိုင်သည့်ပါသည်။ ရေသောက်မနည်းဖို့ လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အေးနေသည့်ဥတုကြောင့် ရေသောက်နည်းတက်ကြပါတယ် အေးနေပေမဲ့တစ်နေ့ ရေကို အနည်းဆုံး နှစ်လီတာလောက် သောက်သုံးပေးသင့်ပါသည် ။
Source :Mg Mandalay